China HuoXiangZheng Qi Wan abavelisi kunye nabathengisi | HEX
Ixhasa impilo yamajoni omzimba kunye neenkqubo zesisu. Inceda ukunciphisa ukuzala kwesisu.
IPatchouli, amagqabi kaPerilla, iAngelica dahurica, iAtractylode macrocephala (isosiweyo), iphepha leTangerine, iPinellia (eyenziwe), iMagnolia (eyenziwe ngejinja), iPoria, iPlatycodon, ilayisensi, imbiza esiswini, ijusi, ijinja
Le mveliso yipilisi emnyama emxinwa; ivumba elimnandi, liswiti kwaye liyakrakra kancinci.
1. Ukutya kufuneka kube lula.
2. Akucetyiswa ukuba uthathe amayeza aseShayina anesondlo ngexesha lonyango.
3. Izigulana ezinezifo ezinganyangekiyo ezinje ngoxinzelelo oluphezulu lwegazi, isifo sentliziyo, isifo sesibindi, isifo seswekile, isifo sezintso, abasetyhini abakhulelweyo okanye abaguli abenza olunye unyango kufuneka bayithathe phantsi kokhokelo lukagqirha.
4. Kwiintsuku ezintathu emva kokuthatha iyeza, iimpawu aziphucuki, okanye ukugabha kunye norhudo kuyabonakala, kwaye ezinye iimpawu ezinzulu kufuneka ziye esibhedlele.
5. Thatha ngokuhambelana nokusetyenziswa kunye nedosi. Abantwana kunye nabantu abadala ababuthathaka emzimbeni kufuneka bayithathe phantsi kokhokelo lukagqirha.
6. Dibana nogqirha ukuze usebenzise ixesha elide.
7. Abantu abagulayo kule mveliso akufuneki bayisebenzise ngononophelo.
Akuvunyelwe ukusebenzisa le mveliso xa iipropathi zayo zitshintsha.
9. Abantwana mabasetyenziswe phantsi kweliso lomntu omdala.
10. Nceda ugcine le mveliso kude nabantwana.
Egqithileyo Liu Wei Di Huang Wan
Okulandelayo: UGan Mao Ling (Itheyibhile enombala wefilimu)